20 teams for All Africa Golf Championships - DailyNews Live
SPORTS WRITER • 7 September 2017 12:20PM • 0 comments
HARARE - At least 20 countries will take part at this year’s All Africa Golf Team Championships scheduled for next month at Elephant Hills Golf Course in Victoria Falls.
The tournament which is a continental national amateur event is scheduled to start on October 8 to 14 and is being organised by the Zimbabwe Golf Association in conjunction with the Africa Golf Confederation and the Royal and Ancient of Scotland.
Some of the countries that have already confirmed their participation include Ghana, Seychelles, Mali, Nigeria, South Africa, Reunion Islands, Kenya, Namibia, Tunisia, Zambia, Mauritius, Uganda, Swaziland, Angola and Morocco among others.
The All Africa Golf Team Championships is held after every two years with Zimbabwe finishing third behind winners South Africa and hosts Kenya, who came second in 2015.
“Countries are requested to send four of their top national amateur players along with a coach and president of their national association/Union for a contingent total of six,” reads a statement from the organisers.
“The executives of the Africa Golf Confederation and representatives of the Royal and Ancient of Scotland will grace the tournament.”
The tournament prepares the top African amateurs golfers for the World Amateur Team Championships that are held every two years under the auspices of the International Golf Federation.